रातारात भाईरल भएकी प्रियालाई मोबाइल बोक्न किन लगाइयो प्रतिबन्ध? - pnpkhabar.com
You are at:Home»इसमाचार»रातारात भाईरल भएकी प्रियालाई मोबाइल बोक्न किन लगाइयो प्रतिबन्ध?
रातारात भाईरल भएकी प्रियालाई मोबाइल बोक्न किन लगाइयो प्रतिबन्ध?
By मनिषा थापा on ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०८:२२ इसमाचार
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएकी मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियरलाई मोबाइल बोक्न रोक लगाएका छन् ।एक सञ्चार माध्यमले हालै लिएको एक अन्तर्वार्तामा उनका पिताले प्रियालाई मोबाइल बोक्न नदिइएको बताएका हुन् ।
केही समयअघि कक्षा कोठमा सहपाठीलाई आँखा झिम्काएको प्रेममय अभिनयले सञ्चार माध्ययम र सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी उनलाई मोबाइल बोक्न उनको परिवारले रोक लगाएका हुन् । उनकाअनुसार आवश्यक परे प्रियाले आफ्नी आमाको मोबाइल प्रयोग गर्न भने सक्छिन् ।